Android 11 ikozvino yavapo vhezheni yeakanakisa yekushandisa system | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, Google, kuburikidza nemusuo wevanogadzira, yakave nemufaro kuzivisa kuti yave kuwanikwa Android 11. Ichi ndicho chechipiri chikuru chekuvandudza pasina kuperekedzwa nezita rekuti chinotapira Uye kwayakatanga kusvika ndeye Android Open Source Project (AOSP), asi ichakurumidza kutanga kusvika, kana isiri kuita kudaro, kune mamwe maPixel, Xiaomi, OnePlus, OPPO uye realme mafoni.
Panyaya yemabasa, inouya nevakawanda, chimwe chinhu chisingashamisi nekuti iko kuchinja kwenhamba uye imwe yeshanduro nyowani dzinoburitswa gore rega rega. Vagadziri veGoogle / Android vanoti vakatarisa pazvinhu zvitatu: kutaurirana pakati pevanhu, kutonga uye kuvanzika. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kuzivikanwa emhando itsva ayo asvika ne Android 11.
1 Android 11 zvakakosha
2 Inowanikwa kubva munaGunyana 8
Android 11 zvakakosha
Sezvatinoverenga mu yekuvandudza portal, Android 11 inouya nenhau idzi:
Izvo zviziviso zvehurukuro zvinowoneka muchikamu chakazvitsaurira kumusoro kwemumvuri, ine dhizaini iyo inotibvumidza isu kuti tiwane vatinosangana navo nekukurumidza uye nezviitiko zvakakosha, sekuvhura hurukuro mubhodhi.
Bubbles uko machats anozoderedzwa. Ichi chinhu chatakatomboona mumashandisirwo, asi izvo zviri kutarisirwa kuwedzera kune iyo yese sisitimu yekushandisa. Asi kuti izvi zvigoneke, vanogadzira vanofanirwa kushandisa iyo nyowani Bubbles API.
Yekhibhodi mazano evashandisi akavandudzwa.
Dhizaini yedhizaini yekukurumidza uye nyore kuwana uye kutonga kweanobatana michina. Izvi zvichaonekwa nemuchina wekureba pane bhatani rekudzima, pamwe nezvimwe zvese zvasarudzo zvakatowoneka mumashanduro apfuura uye zvinotibvumira kuti tivhare, titangise, nezvimwe.
Multimedia zvinodzora zvinozovandudza switch kuchinhu chinoburitswa chemodhiyo nemavhidhiyo zvemukati, angave mahedhifoni, maspika, kana kunyange terevhizheni inoenderana.
Mvumo kamwe, izvo zvinotibvumidza kupa app mvumo kune maikorofoni, kamera kana nzvimbo kamwe chete. Izvi zvinoita kuti kuve nekuchengetedzeka, nekuti Anwendung haizove nemvumo yekutisora ​​nekuti takapa mvumo, semuenzaniso, kumakrofoni.
Nzvimbo yekumashure ikozvino inoda mamwe matanho, ayo zvakare anovimbisa kuwanda kwevamwe.
Auto-kudzoreredza mvumo, iyo inogona kumisazve mvumo yeapp yatisina kumboshandisa kwenguva yakareba.
Yakaunganidzwa yekuchengetedza kuitira zvirinani kuchengetedza application uye mushandisi data pane ekunze madhiraivha.
Sisitimu inogadziridza kubva kuGoogle Play ikozvino yakapeta kaviri huwandu hweanokwidziridzwa ma module, anosvika kusvika gumi nemaviri ayo anovandudza zvakavanzika, chengetedzo uye kuenderana.
BiometricPrompt API kudoma kusimba kweiyo biometric chiziviso chinodiwa neapp kuti uvhure kana kuwana zvikamu zvisinganetsi zvacho.
Credential Identity API, iyo inovhura mashandisiro matsva senge marezinesi ekutyaira, National ID uye Dhijitari ID.
Yakawedzerwa 5G rutsigiro.
Mhando nyowani dzescreen.
Fona firita rutsigiro.
Iyo yekushandisa sisitimu yave kuwedzera simba uye kugadzikana, muchidimbu nekuti ndangariro dzekudzosa ndangariro dzakagadziriswa.
Yakawiriraniswa IME shanduko, iyo inotibvumidza kuyananisa zvirimo zvemapurogiramu edu neinopinda nzira edhita (IME) kana iyo -chiratibhodhi keyboard uye system mabara.
Mifananidzo yeHEIF yemifananidzo.
Wemuno mufananidzo decoder.
Yakaderera latency vhidhiyo kudhizaina muMediaCodec.
Chinosiyanisa zororo zororo.
Dynamic sosi inotakura.
Inowanikwa kubva munaGunyana 8
Sezvatambotaura, Android 11 iri inowanikwa kubva nezuro, Gunyana 8 saAOSP, asi zvakare yakatanga kusvika kuPixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO uye realme mafoni. Sezvishandiso zvawo, Google inoziva kuti ndeapi matemu echiratidzo chayo ichagadziridzwa kare, uye yakataura zvakananga nezvePixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 nePixel 4a, kusanganisira izvo zvaive zvakabatana nechekare. chirongwa. Vashandisi ava vanofanirwa kutarisa kana vatove neiyo nyowani nyowani yakamirira mune yekushandisa system yekuvandudza chikamu. Avo vasina rombo rakanaka vachatofanira kumirira imwezve nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Android 11, ikozvino inowanika yega yemunhu, yakavanzika uye iri nyore-kudzora vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu
Zorin OS 15.3 inosvika kunatsiridza sisitimu yekushandisa uye kuita kuti iwedzere kuvimbika, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
libtorrent 2.0 vhezheni inotyora kuenderana uye kunonoka WebTorrent